वितरकलाई ए मेरो हजुर ४ चाहियो, तर झरनालाई ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGossipवितरकलाई ए मेरो हजुर ४ चाहियो, तर झरनालाई ?
May 26, 2019 sutraentertainment Gossip, Kollywood, News 0
ए मेरो हजुर ३ चलेपछि निर्देशक झरना थापालाई भागवत गीता बनाउन मन छ । किनकी, यो सिनेमा खेल्नका लागि अभिनेता अनमोल केसी राजी हुन सक्छन् । ए मेरो हजुर ३ ले कमाएको रकमले पनि झरना अनमोललाई फिल्ममा लिन चाहन्छिन् ।
तर, झरनाको सोच र वितरकको सोच अर्कै छ । ए मेरो हजुर ३ सुपरहिट भएपछि वितरकले ए मेरो हजुर ४ बनाउन झरनालाई सुझाव दिएका छन् । ए मेरो हजुर ४ मा झरना छोरी सुहाना थापा र अभिनेता अनमोल केसीलाई नै राख्ने मुडमा छैनन् । ए मेरो हजुर ४ मा त अनमोलको पनि रुची छैन ।
झरना अनमोल केसीलाई छाड्न चाहन्नन् । किनकी, झरना थापालाई अनमोल राख्दा फिल्म सुरक्षित हुन्छ भन्ने छ । अनमोल केसीप्रति झरनाको आशा धेरै छ । उनी, भागवत गीता खेल्न अनमोल राजी भए यो फिल्म नै बनाउन चाहन्छिन् । छोरी सुहाना थापालाई अमेरिकामा छाडेर उनी करिब २ महिनापछि आउनेछिन् । अनमोलले राजी भए भागवत गीता, नत्र ए मेरो हजुर ४ । झरना र वितरकको सोच नै फरक छ ।
नेपाली फिल्मलाई हलसम्म पुर्याउन नै धौ धौ
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली फिल्ममा चलेका कलाकार र वुझेका निर्माता हुन् भूवन केसी । भूवन केसीले बर्षमा एउटा सिनेमा बनाउने कोशिश गर्छन् । भूवन केसी जस्ता निर्मातालाई सिनेमा हलमा ल्याउन धौ धौ भयो । कारण थियो, […]
बर्षा शिवाकोटीको स्टाटसमा बर्षा राउतको कमेन्ट: सबै कुकुरको दिन आउछ !
May 19, 2019 Tulasa Karki Kollywood, News 0
शुक्रबारबाट प्रर्द्शनमा आएको फिल्म ‘बीर विक्रम २’की अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटी प्राय: फिल्म नचल्ने भएका कारण उनको अभिनयमा औंला उठाइने गरिन्छ । यसैबिचमा रिलिज भएको उनको अर्को फिल्म हो ‘बीर विक्रम २ ‘ भखरैमात्र बर्षाले सामाजिक […]
भाग्ने र डराउने सोचले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँदैन र ?
March 26, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- सिनेमा यात्राको ट्रेलर रिलिजको समयमा अभिनेता सलिनमान बनियाँलाई पत्रकारले ए मेरो हजुर ३ सँग सिनेमा जुध्न लागेको कुरा सोधे । सिनेमा जुध्न लागेकाले यो प्रश्न स्वभाविक पनि थियो । तर, अभिनेता सलिनमान बनियाँको […]